DF oo digniin iyo amaro ka soo saartay guddigii doorashada ee uu magacaabay Sheekh Shaakir | Goojacade
Home War DF oo digniin iyo amaro ka soo saartay guddigii doorashada ee uu...
DF oo digniin iyo amaro ka soo saartay guddigii doorashada ee uu magacaabay Sheekh Shaakir
Warar baxaya ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay soo saartay amar culus oo ka dhan ah, dhaq dhaqaaqyada siyaasadeed ee haatan ka socda magaalada Dhuusamareeb ee Caasimada dowlad goboleedka Galmudug.
Amarkan oo la ogeysiiyey hoggaanka sare ee Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa lagu sheegay in aan wax dhaq dhaqaaq siyaasadeed oo la xariira doorashada maamulka Galmudug, islamarkaana aysan ogeyn dowladda dhexe aan lagu qaban karin gudaha magaaladaasi.
Sidoo kale warkan ayaa lagu sheegay in geedi socodka doorashada looga dambeynayo kaliya guddiga farsamada ee ay horay u magacowday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, kaas oo ka kooban illaa 13 xubnood.
Ugu dabeyn guddiga uu magacaabay Sheekh Shaakir oo 11 xubnood isna ka kooban ayaa looga digay in shirar siyaasadeed ay ku qabtaan Dhuusamareeb, waxaana loo sheegay in dowladdu ay u wakiilatay howlahaasi guddiga wasaarrada arrimaha gidaha Soomaaliya.
Arrintan ayaa u muuqata in dowladdu ay markan awood u adeegsaneyso xiisada ka aloolsan Galmudug oo sii xoogeysatay, kadib markii ay Ahlu Sunna ka hortimid dadaallada dowladda ee maamul dhisida gobollada Galgaduud iyo Mudug ee bartamaha Soomaaliya.
Previous articleDaawo Ciidamadda Qalabta sida Qaybta 21 aad oo u dabaaldegaya la wareegistii Guriceel
Next articleDF Somalia oo ciidamo hor leh geysay Dhuusamareeb